I-Private Suite endaweni Enhle yeCariboo
Williams Lake, British Columbia, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Debora
Nethezeka endaweni enethezekile, eyimfihlo endaweni yasemakhaya iCariboo ebeka imizuzu nje ukuya enkabeni yedolobha nazo zonke izinsiza. Indawo engamahektare ayi-5 iyigugu eliyivelakancane elizungezwe izihlahla ezinde, imizila emihle yokuhamba nakho konke okunikezwa yimvelo.
Igumbi lokulala nokugeza kubanzi futhi kubekwe kahle futhi ikhishi lomqondo ovulekile linakho konke okudingayo ukuze uzenzele ukupheka. I-suite ine-driveway yangasese kanye nokungena kanti impahla ibiyelwe futhi ihlehlele emuva emgwaqeni osuvele uthule.
Indawo esihlala kuyo ihlukile njengoba izwakala njengendawo yokubalekela yasemakhaya kodwa ukude nedolobha imizuzu embalwa futhi unokufinyelela okugcwele, okulula ezindaweni zokudlela, ukuthenga kanye nezinsiza.
Sihlala endaweni yokuhlala futhi sitholakala kalula futhi sijabule ukuhlinzeka nganoma yiluphi ulwazi nge-suite, izindawo ezikhangayo zendawo endaweni noma amathiphu okuhlala okuhle e-Cariboo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Williams Lake namaphethelo